अनमोललाई हेर्न एकै ठाउ २४ हजार दर्शक, सबैलाई अटाए आफ्नो मोबाईलको सेल्फिमा - Purbeli News
प्रकाशित मिति: मंगलबार, माघ २९, २०७५ समय: १३:४५:२३
ईटहरी/ फागुन १७ गतेबाट रिलिज हुने चलचित्र ‘क्याप्टेन’ को मोफसल प्रचारका लागी अनमोल केसी नेपालगन्ज पुगेका छन् । नेपालगन्जमा आयोजीत प्रथम प्रादेशीक औद्योगिक लघु, घरेलु तथा कृषि, प्रविधि, व्यापार एंव पर्यटक महोत्सव २०७५ खजुराका दर्शकमाझ अनमोलसहित क्याप्टेन निर्माण टिम पुगेको थियो । अभिनेता केसीलाई नेपाल प्रहरी, सशत्र प्रहरी र रक्षक सेकुरेटी गार्ड कम्पनीका गार्डहरुको कडा सुरक्षा व्यवस्थाका साथ अनमोललाई मञ्चमा उकालिएको थियो ।
महोत्सवमा अभिनेता केसी आउने तय भएसँगै दर्शकले उनलाई महोत्सव स्थलमा लामो समयदेखि पर्खेर बसेका थिए । लामो प्रतिक्षा पश्चात अनमोललाई मञ्चमा पाएसँगै दर्शकले ताली, हुटिङले पुरै खजुराको माहोल तातेको थियो । महोत्सवको मञ्चमा अभिनेता केसी र दर्शकविच रिलिजको तयारीमा रहेको चलचित्र ‘क्याप्टेन’ का विषयमा सवाल जवाफ समेत भएको थियो । दर्शकले अनमोललाई ‘क्याप्टेन’ कहिले रिलिज हुन्छ ? भनेर सोधेका थिए ।
उनले चलचित्र फागुन १७ गतेबाट प्रदर्शन हुने बताए । फेरी अनमोलले दर्शकलाई ‘क्याप्टेन’ कहिले रिलिज हुन्छ रे ? भनेर दर्शकलाई सोधेर उनले हजारौँ दर्शकमाझ चलचित्रको प्रचार प्रसार गरे । योसँगै दर्शकमाझ उनले क्याप्टेनको हिट गीत ‘रहर छ सँगै’ बोलको गीतमा डान्सका केही स्टेप देखाएका थिए । महोत्सवमा उपस्थीत दर्शकले थोरै समय भएपनि अनमोललाई हेर्न पाएकोमा खुशी व्यक्त गरे । उक्त महोत्सव समारोहमा सोमबार सदावहार अभिनेता भुवन केसी र अभिनेत्री निरुता सिंहको प्रस्तुती रहने छ ।